समृद्ध मुलुक सबैको चाहना « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2018 April 16, 2:44 pm
महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनता पार्टी, अध्यक्ष मण्डलका संयोजक : रिपोर्टर्स क्लबलाई स्थापनाकालको बीसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बधाई र शुभकामना छ । क्लबले सधै नेपाली जनतामाझ सही सूचनाप्रवाह गरेर परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा पत्रकारहरू छँदैथिए, त्यसमाथि पनि अझ रिपोर्टर्स क्लबले त्योभन्दा माथि उठेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विचार आदानप्रदान गरेर सुसूचित बनाएको छ । यो क्लबको स्थापनादेखि समाजमा भएका सबै वर्गले आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा पस्कने अवसर पाएका छन् । यहाँ आएर ठूला राजनीतिक दलदेखि ओझेलमा परेका गरिब, दुःखीहरूले पनि आफ्ना मनमा लागेका दुःखेसो पोख्न पाएका छन् । यहाँ सबै वर्गको विचार प्रवाह गर्ने ठाउँको रूपमा लिएका छन् । यसले समाजमा घटेका घटना दुर्घटनाको चिरफार गर्ने गरेको छ । त्यस कारण रिपोर्टर्स क्लब समाजका हरेक वर्गका सामु अझ विश्वसनीय थलो बन्ने गरेकाले भविष्यमा पनि यसको अझ बढी प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
यहाँ सरकारको स्थिरता, विकास र समृद्धि संख्याको कुराले मात्रै हुँदो रहेनछ । यहाँ संविधान पनि ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको हो । तर, त्यो पनि सबै वर्ग र समाजले स्वतःस्पूmर्त रूपले लिन सकेन । त्यसैले यहाँ अपार बहुमतको सरकार बन्दैमा यो स्थिरता भइहाल्छ भन्न सकिन्छ । देश र जनताको जुन समस्या छ, त्यसको सम्बोधन र समाधान कसरी हुन्छ त्यो ठूलो कुरा हो । यो समस्यालाई कसरी टाढा बनाउने र जनतासामु जुन उद्देश्यले संघीय प्रदेशको संरचना भएको छ । केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले आमजनतामाझ राज्यको पहुँच पु¥याउन सकेन । त्यो समस्यापूर्ति गर्नका लागि राज्यले संघीय संरचनाको आवश्यक महसुस गरेको हो । जनताले समयमै सेवासुविधा पाउन सकुन् । चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसायलगायतका यावत् विषयमा राज्यमाथि नै निर्भर हुन्छ । निजी क्षेत्रले शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रै काम गरिराखेका छन् । जुन सामुदायिक विद्यालयहरू छन् तिनले मात्रै अहिलेका आवश्यक पूरा हुन सक्दैन । प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै विकास गर्नु पर्नेछ, त्यो गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा समृद्ध हुने भए देशको नामै राखिदिए भइहाल्छ नि नेपालको नामै समृद्ध नेपाल । नाम राखेर मात्र हुन्छ ? देशमा जुन समस्या छ, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ तब विकास र समृद्धि हुन्छ । कुनै विषयमा असन्तोष रहन्छ भने त्यहाँ विस्फोट भइरहन्छ । सारा मुलुकको चासो छ नेपाल समृद्ध होस् भनेर । कुनै देशबाट यहाँ राजनीतिक समस्या पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न किन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, समृद्ध मुलुक बनाउँछु भनेर । पाँच वर्षसम्ममा बनाइदिनु कसले विरोध गरेको छ र । हामीसँग जुन सहमति भइरहेको छ त्यो नै पूरा भएको छैन अहिलेसम्म । प्रधानमन्त्रीले चार बुँदा बनाउनुभएको थियो त्यो पूरा भयो त ? सीमांकनका अलावा तराईका मुद्दाहरू छन् । अपांग, सशक्तको मुद्दालगायतका विषयमा सरकारसँग असहमति नै छ ।
सरकारमा रहेका अयोग्य भनांै भने सबै महाभारतको लडाइँ नै लडेर आएका छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद्हरू सबै अपराधको आरोप लागेका व्यक्ति छन् । कसलाई अपराधी भन्ने ? मन नपरे आरोप लगाइदियो भैगो । सबै जेलनेल भोगेर आरोप लागेर आएका छन् । उनीहरू चाहिँ शुद्ध भए गंगामा नुहाएर आए, उनीहरू पवित्र भए । अरू जनजाति, दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, मधेसी अपवित्र भए । यहाँ दोषी को हो त्यसको पहिचान हुनुपर्छ दोषीले सजाय पाउनुपर्छ तर जो निर्दोष छ त्यसले त सजाय पाउनु भएन । यस्तो व्यवस्था त राजतन्त्रमा पनि त थियो । अहिले आएर गणतन्त्र नेपालमा के परिवर्तन भयो त ?
यो लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारिका ‘अब समृद्धिको पाईला” बाट साभार गरिएको हो ।